Haasi Iye Mutsoropodzi Anoverenga | Martech Zone
Haasi Iye Mutsoropodzi Anoverenga
Svondo, May 16, 2010 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Haasi iye mutsoropodzi anoverenga; kwete murume anonongedzera kuti murume akasimba anogumburwa sei, kana uko anoita zviito angadai akazviita zvirinani. Mbiri ndiyo yemurume ariko chaizvo munhandare, uyo chiso chake chakashatiswa neguruva nedikita neropa, uyo anoshingairira neushingi; uyo anokanganisa uye anopfupikazve kakawanda; nekuti hapana kuedza pasina kukanganisa nekutadza; asi ndiani chaizvo anovavarira kuita chiito; ndiani anoziva kushingairira kukuru, kuzvipira kukuru, anozvishandisa pachinangwa chakakodzera, uyo pakupedzisira anoziva mukukunda kwekubudirira kwepamusoro uye ndiani pane zvakanyanya, kana akakundikana, zvirinani anotadza achitya kwazvo. Saka kuti nzvimbo yake isambove iine avo vanotonhora uye vanotya mweya vasingazive kukunda kana kukundwa. Theodore Roosevelt
Nezuro husiku, ini ndaive ndiri mu musangano we Techpoint Mira Mipiro. Iyi mibairo yedunhu renharaunda yehunyanzvi muIndiana. Iyo mibairo yaive yakanakisa uye zvaive zvakanaka kuona matatu mabhizinesi andakashanda nawo - ExactTarget, Imavex uye Bluelock - vanozikanwa nebasa guru ravanga vachiita. Iko hakuna tsaona kuti vatatu veECE makambani aya ndivo vamwe vevakuru vanhu vandakasangana navo.
Bob Compton akabvisa manheru, achiwana mubairo weLifetime Achievement Award, uye achipa iyo yakanakisa quote pamusoro. Icho chirevo chaanochengeta muchikwama chake uye achigovera kune wese muzvinabhizimusi waanosangana naye.
Tags: mupepetifacebook kushambadzirakuzivikanwa kweGoogleMedia Valleypew kutsvagisareachlikutanga kwevhikimamiriro ekunze anotarisaWebexyoast
Taura neni neTokBox